Estesstvenno द्वारा lashes कसरी लामो पार्नू गर्न?
"परेलाहरु ताली र उड अप ..." - धेरै केहि मान्छे यस पटक लोकप्रिय गीतको सुने छैन। र चाहनुहुन्छ जसले धेरै हुन सक्छ जो यस्तो परेलाहरु छ "उड।" सबै बडा र थप expressive जस्तो उकालो charmingly झुकेको बाहेक लामो र बाक्लो परेलाहरु छन्, र यसैले हामी आँखा बनाउन चाल सबै प्रकारका प्रयोग गर्न छ। त्यहाँ परेलाहरु लामो पार्नू गर्न धेरै तरिकाहरू छन्। यसरी, कस्मेटिक कम्पनीहरु प्रभाव को एक किसिम संग mascaras धेरै उत्पादन: को lengthening र मात्रा रंग र चमक, आदि थप्न र कस अप र पानी प्रतिरोधी र को लास साथै, तिनीहरूले पनि उत्पादन र गलत परेलाहरु को एक किसिम। एक सौंदर्य सैलून र यी प्राकृतिक आँखा आभूषण को सबै भन्दा निर्माण गर्न प्रस्ताव सेवा गर्छ। तर यो सबै, हाय, छोटो-बस्ने: को काजल प्रत्येक समय धुन पर्छ, झूटा परेलाहरु - unstick र Naroscheny आफूलाई बिस्तारै गायब, र तिनीहरूले सही छैन भने, त्यसपछि यो सौन्दर्य, तर धेरै depressing अमरीकी हुन थियो।
तर कसरी बढ्न लामो परेलाहरु? प्रश्न, को पाठ्यक्रम, राम्रो छ, तर यो जवाफ तथापि, अवस्थित, र एक। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम: सधैं, पनि धेरै थकित भने, आँखा मेकअप हटाउन बल खोज्न निश्चित हुन। बनाउन-अप रिमुभर यस विशेष हालतमा गर्छन्। प्रत्येक wiping आँखा पछि कपास प्याड बिल्कुल सफा हुनेछन् सम्ममा हटाउन। मसी एकदम भारी र परेलाहरु dries, र यदि यो धोएका छैन, त्यसपछि तपाईँले बस केही हुनेछ भन्ने तथ्यलाई रंग लागि: परेलाहरु बाहिर गिर वा तोड्न हुनेछ।
तपाईं कडाई यो नियम पालन भने, प्राकृतिक तरिका मा परेलाहरु लामो पार्नू गर्न सबै निम्न सिफारिसहरू आफ्नो पक्षमा जानुहोस्। त्यसैले, बनाउन क्रममा आफ्नो lashes अब बन्न र फ्लफी, अरंडी तेल प्रयोग गर्नुहोस्। यो यद्यपि, यो दोस्रो हो पुरानो र सिद्ध विधि हो, तर कार्य गर्नेछ। त्यसैले रोगी, अरंडी तेल र परेलाहरु लागि सफा ब्रश हुन। ब्रश बरु पुरानो शवों देखि बाँकी थियो कि एक प्रयोग भन्दा, अलग किन्न राम्रो छ। तपाईं lashes मा तेल लागू गर्नु अघि, ब्रश पानी उम्लिरहेको भन्दा खन्याउन राम्रो छ। एक महिनाको लागि हरेक दिन lashes चिकनाना। तथापि, अरंडी तेल सन बीउ वा बादाम लागि साटासाट गर्न सकिन्छ, तिनीहरू सबै धेरै राम्रो तरिकाले बलियो र lashes पोषण र उनको वृद्धि प्रोत्साहित छन्। त्यो हो, एक महिना र तेल अभिषेक र प्रभाव स्थायी अघि तीन महिना, यो प्रक्रिया हरेक तीन महिना पूरा - "। एक ब्रेक"
मा फार्मेसी भिटामिन ई र ए तिनीहरू साना बोतल मा तेल को रूप मा उत्पादित गर्दै छन् किन्न, त्यसैले तिनीहरू पनि एक विशेष ब्रश वा ब्रश लागू गर्न सक्नुहुन्छ, आधा घण्टा राख्न र न्यानो पानी बन्द धुन: तपाईं अझै पनि यहाँ परेलाहरु कसरी लामो पार्नू छ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यी भिटामिन एक घण्टा पछि बन्द धुन आवश्यकता हो, माथि उल्लेख गरिएको तेल थप गर्न सकिन्छ त र उत्पन्न गर्दैन आधा, एक तालिका लुगा धुने समयमा बिहान धोएका गर्न सकिन्छ। यो पनि lashes पूर्ण nourishes छ धेरै साधारण Vaseline। राति यसलाई लागू र बिहान पानी कुल्ला। प्रक्रियाहरु को एक महिना पछि आफ्नो परेलाहरु धेरै राम्रो हुनेछ।
त्यहाँ अझै पनि लामो परेलाहरु बनाउने तरिकाहरू छन्? को पाठ्यक्रम! तेल संग एक मास्क प्रयास गर्नुहोस्। यसलाई सरल छ: एक कपास बल वा डिस्क सानो तेल ड्रिप मा, र5मिनेट लागि परेलाहरु तिनीहरूलाई संलग्न। यो न्यानो पानी पछि आफ्नो आँखाले राम्रो कुल्ला। यस्तो प्रक्रिया एक महिना पछि, तपाईं आफ्नो रेशमी र चमकदार लामो परेलाहरु को पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्दैन।
विशेष चिमटी को परेलाहरु अप कस गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई, म अलग सकेसम्म infrequently यसलाई के सोध्न चाहन्छु। लागि संडसी कर्लिंग परेलाहरु मात्र तोड्न र आफ्नो संरचना बिगार्छ, त्यसैले तपाईं त्यसो यदि तपाईं सबैभन्दा असाधारण अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। दुई दुष्कर्मलाई बीच छनौट गर्दा, दुवै परेलाहरु लामो पार्नू र तिनीहरूलाई tweak, को लास माथि कस प्राथमिकता दिनुहोस्। किनभने, सार मा, एउटै बाल छन् परेलाहरु, आराम गर्नुपर्छ र हेरविचार उनको टाउको मा एक बाल भन्दा कुनै खराब हुनुपर्छ।
Bangs संग मध्यम बाल लागि मोटा केश (फोटो)
आफ्नो पक्षमा स्टाइलिश केश
वृद्धि बाल रूपमा
उत्तरी-कमान्डर नहर। यूक्रेन, उत्तर-कमान्डर नहर
पाँच कारण फोन राम्रो मामला किन्न
कार्यक्रम बिना र इन्टरनेट बिना Windows7पुनर्स्थापित गर्दा ल्यापटप कसरी चालक सुरक्षित गर्न? Windows7पुनर्स्थापित हुँदा एक USB फ्लैश ड्राइव मा कसरी चालक सुरक्षित गर्न?
रेडियम Habirov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, पेसा
पटाया - द सिटी सिटी ड्रीम्स
"Antey" पनडुब्बी: प्राविधिक विनिर्देशों